पैसा नखन्याई कलाकार बन्न धेरै गाह्रो रहेछः गायिका मिरा गिरी | Artist Khabar
पैसा नखन्याई कलाकार बन्न धेरै गाह्रो रहेछः गायिका मिरा गिरी	कार्तिक, काठमाडौं । नेपाली लोकगीत क्षेत्रमा आफुलाई स्थापित गराउँदै गरेकी गायिका हुन् मिरा गिरी । अहिले सम्म उनले दर्जनौं गीतहरुमा स्वर दिइसकेकी छिन् । साथै आँफैले लगानी गरेर पनि उनले अहिलेसम्म १५ वटा गीत बजारमा ल्याइसकेकी छिन् । गीतसंगीतको क्षेत्रमा लागेको जम्मा तिनबर्ष पुगेको बताउने मिराले गीतमा स्वर दिनुका साथै शब्दहरु पनि कोर्ने गर्दछिन् ।
आजभन्दा तिनबर्ष अघि चर्चित गायक रामजी खाँणसँग एक दिन रेकर्ड गरेर आफुलाई गायिकाको रुपमा चिनाउँदै आएकी मिराले अहिलेसम्म धेर गायकहरुसँग गीत रेकर्ड गराइसकेकी छिन् । यसैबिच हामिले गायिका मिरा गिरीसँग आर्टिस्ट खबर डटकमको कार्यालय सम्म बोलाएर गीतसंगीत क्षेत्रसँग सम्बन्धित दुख सुखका केहि कुरा गरेका छौं ।
तपाईलाई गायिका बन्छु भन्ने लागेको थियो कि थिएन ?
सानै बाट गायिका नै बन्छु भनेर हिडेकी त होइन तर पछि बिस्तारै आँफुलाई लोकगीतहरु निकै मन पर्ने र आँफुले गुन्गुनाउँदा आफ्नो स्वर पनि राम्रो भएको साथीहरुले प्रतिक्रिया दिएपछि यो बिषयमा सोचेकी हुँ । त्यसपछि चाँही गायिका बन्नु पर्यो भन्ने लागेको हो ।
तपाईको बिचारमा गीत संगीत के रहेछ ?
मैले बुझेको गीत संगीतको कुरा गर्दा मानव जीवनमा नभई नहुने कुरा हो गीत संगीत । कुनै पनि क्षण होस् चाहे सुख चाहे दुख हरेक पलमा गीतसंगीतको आवश्यक हुन्छ । त्यसैले गीतसंगीत र मानव जीवनको सम्बन्ध नङ र मासु जस्तै हो ।
कतिबर्ष पुगेछ आजसम्म गायिका नै भएको ? अनि गीतकति वटा गाउनु भयो ?
धेरै त होइन भर्खर तिनबर्ष पुगेको छ । अझैपनि संघर्षको समयमै छु । अहिलेसम्म गीतहरुमा स्वर दिएकै कुरा गर्दा त यकिन छैन तर आँफ्नै लगानीमा बजारमा आएका गीतहरु चाँही प्रन्ध वटा पुगे । अन्य गीतहरु धेरै नै भए त्यति सम्झना चाँही भएन ।
शुरु शुरुमा त गायिका बन्न निकै गाह्रो छ भन्छन् नि, तपाईले कत्तिको संघर्ष गर्नुपर्यो ?
अँ… धेरै नै गाह्रो भयो । मलाई मात्र होइन यो क्षेत्रमा आउन चाहाने अधिकाशंलाई निकै गाह्रो छ । यो क्षेत्रमा आफ्ना मान्छे र पैसा भएका मान्छेलाई सहज छ तर आँफुसँग कला भएपनि पैसा नहुनेहरु यो क्षेत्रमा आउन र बाँच्न धेरै गाह्रो रहेछ । यदि कला छैन भनेपनि तपाईलाई गायक गायिका बनाइदिन्छु भन्नेहरु बाटैपिच्छे भेटिन्छ यहाँ । मलाई पनि शुरुमा निकै संघर्ष गर्नुपर्यो ।
शुरुमा कुन गीत गाउनु भएको थियो ?
मैले शुरुमा स्वर दिएको गीत आदरणीय दाई रामजी खाँणसँगको ‘लाग्छ तिम्रै भर तिमी जहाँ भएपनि आउँहै सानु मेरो अरु कोनै छर’ बोलको गीतहो । त्यस गितमा मैले नै शब्द भरेकी थिएन । सुरुको गीतलाई पनि दर्शक तथा स्रोतले राम्रै मन पराइदिनुभएको थियो ।
गायिका तथा नायिकाहरुलाई प्रेम प्रस्ताव धेरै आउँछ भन्छन् नि, तपाईलाई कत्तिको आएको छ ?
हैन प्रेम प्रस्ताव भन्ने कुरा गायिका तथा नायिकालाई मात्र नभएर सबैलाई आउँछ । मेरो कुरा गर्दा प्रेम प्रस्ताव त आउँछन् तर आयो भन्दैमा स्विकार्ने कुरा हुँदैन । दर्शक तथा स्रोताको नजरमा आएको प्रेम प्रस्ताव त सधैं स्विकार्य नै हुन्छ नी ।
गीत गाउँनकै लागी अहिलेसम्म कुन कुन ठाउँमा पुग्नु भएको छ ?
गीत गाउनका लागी देश बाहिर त भारत बाहेक अरु देशमा त पुगेकी छैन तर देश भित्रको कुरा गर्दा धेरै ठाउँमा पुग्ने मौका पाएकी छु । कार्यक्रमका लागी स्याङ्जा, पाल्पा, रुपन्देही, सिन्धुली, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर लगायतका जिल्लाहरुमा पुगेकी छन् ।
गीतमा लगानी गरेर बजारसम्म ल्याउनका लागी लागेको खर्च उठाउन गाह्रो छ नि, लगानी उठाउनु भएको छ त ? छैन छैन यो हाम्रो क्षेत्रमा लगानी गरेर एउटा गीत निकालिन्छ तर त्यसको लगानीमा लागेको खर्च उठाउनै मुस्किल पर्छ । एउटै गीत रेकर्ड मात्र गर्न कम्तिमा पनि ३० हजारभन्दा माथि पर्छ, अझ भिडियो बनाएर पब्लिसिटी लगायतका सबैकाम गर्दा डेढ दुई लाख भेट्छ त्यो पैसा उठाउने त गीतबाट मात्रै आशै हुँदैन । अब त्यो गीत निकै चल्यो भने चाँही स्टेज कार्यक्रमहरुमा गएर केहि आम्दानी हुनसक्छ त्यति हो । पैसा नखन्याई कलाकार बन्न धेरै गाह्रो रहेछ यो क्षेत्रमा ।
प्रस्तुतीः गोपिकृष्ण चापागाई /आर्टिस्ट खबर
अरु समाचारहरु आर्टिस्ट फस्टः पहिलो मोबाइल नोकिया ८३१० मोडल, पहिलो सवारीसाधन साईकलः हेमन्त शर्मा दिपकराज गिरी प्रतिको नकरात्मक टिकाटिप्पणीबारे कलाकार संघको प्रेस विज्ञप्ती गायक मिलन लामाले शुरु गरे उदाहरणीय कामः ‘बनको काफल बनकै चरीलाई’ म्युजीक भिडियोमा ब्यस्त निरेन चलचित्र निर्माण तिर आर्टिस्ट फस्टः पहिलो प्रेमप्रस्ताव कक्षा ५ मा, पहिलो कमाई ३५ सयः सुरजनी केसी म हराएको छैन, किन एकतर्फि समाचार आउँछन्ः सुबास कार्की ‘मंगलम’को सुरुवात यस्तो, शिल्पाले गदैछिन् निर्मात्रीमा डेब्यु प्रियंका चोपडाको नेपाली फिल्ममा खड्का जीकी कान्छी श्रीमती बनेकी मञ्जु छनोट नवलपरासीमा नेवि संघले ‘छक्का पन्जा’ टिमका सबै चलचित्र चल्न नदिने मोडलिङ बौद्धिकता र सौन्दर्यताको बिकास गराउने माध्यम हो: मोडल अनुष्का शर्मा यमबुद्धलाई आर्टिस्टहरुले सामाजिक सञ्जालमा यसरी सम्झिए चर्चित र्याप गायक यम बुद्धले गरे आत्महत्या ‘छक्का पन्जा’को पाइरेसी गरेको आरोप लागेका युवकले गरे सुसाईट नोट सहित आत्महत्या दिपिकाले गरीन् हलिउड चलचित्र ‘ट्रिपल एक्स’को प्रमोशन, गोल्डेन गाउनमा सेक्सी अवतार (३० तस्बिर) ‘छक्का पञ्जा’ पाईरेसीमा, फिल्म आयो युट्युबमा (फिल्म सहित) शंकर बिसि र पार्वती राईको नृत्यमा ‘सालघारीमा सिसौ’ (भिडियो) आफ्नी श्रीमतीको नग्न फोटो सेयर गरे यी नायकले प्रेमको कथामा सुर्य श्रेष्ठले ल्याए ‘चोखोमाया दिँदा पनि’ (भिडियो) जाडोमा लगाउने बुटको कथा, किन आर्टिस्टको रोजाईमा छ ‘बुट’ ? मोडलिङ कस्तो हो भन्ने कुरा हेर्ने नजरमा भर पर्छः मोडल मोनिका बुढाथोकी माया गर्नेहरुका लागी टेक बहादुरले ल्याए ‘तिम्रै यादमा बाँचिराको छु’ (म्युजीक भिडियो) जाडोले छुँदैन प्रियंकालाई ? ( ६ तस्बिर) बिहिबार बाट प्रदर्शन हुने ‘लभ सासा’को प्रिमियर, देखियो आर्टिस्टहरुको बाक्लो उपस्थिती एकिकृत मुसहर बस्ती शिलान्यास (१७ तस्बिर सहित) Recent Posts	आर्टिस्ट फस्टः पहिलो मोबाइल नोकिया ८३१० मोडल, पहिलो सवारीसाधन साईकलः हेमन्त शर्मा